China Solid huni sideboard yakapusa yekuchengetera kabhodhi nemusuo mumwe uye mana dhirowa # 0105 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Solid huni sideboard yakapusa yekuchengetera kabati ine musuwo mumwe uye mana dhirowa # 0105
Zita: Rutivi bhodhi
Muenzaniso nhamba: Amac-0105
Kukura: 900mm * 400mm * 800mm
Centennial Oak Chimiro
Chinhu chikuru ndecheFAS-giredhi chena oak inotengwa kubva kuNorth America. Iyo huni yakaoma, ine yakajeka dhizaini uye yakanaka gloss. Mushure mekunyatsogadzirisa, hunhu hwehuni pachahwo hunochengetwa kusvika padanho rakakura, chinova chipo chakapihwa nemasikirwo. Iwo maratidziro akasarudzika emakomo akarongeka zvakarongedzwa, Iyo yepaneru pani yedhirowa inogadzirwa nepaulownia huni nehurefu hwakareba, iyo yakasimba uye yakasimba.
Mumwe musuwo mana dhirowa yekurara kabati
Iwo madhirowa akagadzirwa aine saizi saizi, izere neyakajairika hunyanzvi, uye zvakare anokwanisa kusangana akasiyana nzvimbo yekuchengetera inoda. Kureba kwedare remakurukota kwakagadziriswa mushure memakumi emiedzo, uye ichave iri nyore kunyangwe ukagara pamucheto wemubhedha kusarudza mbatya. Kubatsira iwe kuronga dzimwe shanduko kazhinji Basa rekushandisa, iro rakavharwa dhirowa rinogona kukupa yakakwana yakavanzika nzvimbo.
Solid huni inotsvedza njanji + tenon yekubatana maitiro
Iyo yakasimba huni masiraidhi ekuchera akasimba zvakanyanya. Kuitira kuona kuchengetedzwa kwekushandisa, isu takanyatsogadzira miganho yekudhonza-dhiraidhi padhirowa rimwe nerimwe, saka hapana chikonzero chekushushikana nenjodzi dzekuchengetedza kwekudonha madhirowa kunze. Mitsara yakapfava uye inotsvedzerera, saizi chaiyo dhizaini, Inogona kutsigira yakasarudzika dhizaini yenzvimbo yekugara.
Imwe-chidimbu chakasimba huni kabati makumbo
Iwo makobvu akasimba ehuni makumbo uye isina-kutsemuka uye yekupfeka-isingagadzirike dhizaini pazasi inogona zvirinani kuchengetedza pasi uye kuwedzera hupenyu hwebasa rekhabhineti. Iyo yepasi haibate pasi kudzivirira humhutu uye zvakakunakira iwe kuti uichenese uye uichengete. Imwe-chidimbu gumbo chimiro, kumhara kwakadzikama uye kubata kwakasimba.
Yakakwira mhando hodhi yemahwindo hinji + girazi kabati remukova
Girazi rinoonekera regirazi remakurukota rinoenderana nekuchengetedza uye kuratidza. Mabhodhoro mashoma ewaini yakanaka uye zvidimbu zvidimbu zvehunyanzvi zvinoiswa mukati, izvo zvakanaka uye zvine rupo. Iyo yekumberi vent yakaiswa kusefa mweya mukati, hunyoro-chiratidzo uye inopesana neinofinha. Yakakwira-mhando hodhi yemahwindo hinji, Nyore kuvhura, hapana ruzha, kwete nyore ngura.
Yakakura dhirowa nzvimbo yekuchengetera
Iyo yakasimba huni yakakwenenzverwa mubato inosanganiswa neinodhirowa pamusoro, kutsvedza uye kudhonza mbeveve, kuchengetedza nzvimbo, uye kuchengetedza chitarisiko chiri nyore. Yakashongedzerwa nechengetedzo yekushongedza muchipfuva chemadhirowa yekudzivirira netsaona kurasa kabhineti, kuchengetedza hutano hwemhuri, kuchengetedzeka kwevana, uye vabereki vakasununguka.
Pashure: Imwe Musuwo mana Dhirowa Rutivi Khabhatani Nyore Sofa Rutivi Kabineti Yekuchengetedza Cabinet # 0104
Zvadaro: Taekwondo Kudzidziswa Mhepo Melasi Inflatable Mhepo Tumble Makwara 0381
Sup Surfboard Yakakweshwa Mira kumusoro Paddle Bhodhi 0370
Yese Solid Wood Chest yeMadhirowa Ekurarama Kamuri Mubhedha ...
Imba Dhesiki Rakareruka Computer Tafura Musanganiswa ...